Igumbi labucala nr City Centre & New Delhi Railway stn
Igumbi elise- indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguHarish
Eli ligumbi labucala eline-Air-conditioning elinesefu yombane, ilinen kunye ne-ensuite. Izindlu zokuhlambela zinezixhobo zangoku ezineshawa eshushu nebandayo. Isidlo sakusasa esiKholelwayo, iWiFi kunye neeMaphu zinikwa wonke umntu. Lo mhlaba ungaphakathi kweemitha ezingama-350 zesikhululo sikaloliwe iNew Delhi kunye nesikhululo sikaloliwe sase-RK Ashram. Ime kwindawo edlamkileyo yasePaharganj eDelhi kanye embindini wesixeko. Uyakuhlala unemvakalelo yeReal Delhi kwaye ziintengiso ezindala (iimarike) ezinonxibelelwano oluhle kakhulu.
Indawo yethu yipropathi yesimbo sehostele enamagumbi abucala. Iinkonzo zokucoca amagumbi zifumaneka simahla kwaye xa ziceliwe. Abasebenzi bolwamkelo bayafumaneka iiyure ezingama-24 ukujongana nemibuzo kunye nezinto ezikuxhalabisayo. Qhagamshelana nabo ngokucofa u-9 kwigumbi lakho.
Sinendawo eqhelekileyo yokuba unxibelelane nezinye iindwendwe kunye nathi. Kukho iincwadi kunye neekhompyuter ezimbalwa apho onokuthi uzisebenzise simahla.
Ikhowudi yokufikelela kwi-WiFi iyafumaneka kwi-reception. Ukwamkelwa koqhagamshelwano kwinombolo ye-9 kwiingxaki eziqhelekileyo ezifana ne-Air condition, Amanzi ashushu, i-WiFi ayisebenzi.
Ngenjongo yokungena, onke amalungu amadala aza kuhlala nathi, kufuneka aphathe naluphi na uxwebhu lwentsusa lulandelayo:
1) Ipasi OKANYE
2) Ikhadi lesazisi soMvoti OKANYE
3) Ilayisensi yokuqhuba OKANYE
4) Ikhadi le-Adhaar.
Eli ligumbi labucala eline-Air-conditioning elinesefu yombane, ilinen kunye ne-ensuite. Izindlu zokuhlambela zinezixhobo zangoku ezineshawa eshushu nebandayo. Isidlo sakusasa esiKholelwayo, iWiFi kunye neeMaphu zinikwa wonke umntu. Lo mhlaba ungaphakathi kweemitha ezingama-350 zesikhululo sikaloliwe iNew Delhi kunye nesikhululo sikaloliwe sase-RK Ashram. Ime kwindawo edlamkileyo yasePaharganj eDelhi kanye embindini w…
4.60 out of 5 stars from 107 reviews
4.60 (iingxelo zokuhlola 107)
Sikwindawo edlamkileyo yasePaharganj yaseDelhi eyona nto ikhethwa kuqala kubahambi ngebhajethi ngenxa yokuba sembindini kwaye sikufutshane neSikhululo sikaloliwe saseNew Delhi. Isembindini weDelhi kunye neeBazaars ezindala, iiVenkile, iiNdawo zokutyela eziza kukubuyisela kumaxesha akudala. Sikumgama omfutshane kakhulu ukusuka eConnaught Indawo ehlala enye yezona ndawo zibalaseleyo zokutya eIndiya. Zininzi iindawo zentselo, iindawo zentselo, iindawo zokutyela, iivenkile, njl njl. Yindawo edlamkileyo nasebusuku.
Izimvo eziyi-1 042
Ihlala ikhona kwifowuni, i-imeyile kunye nomntu. Ifumaneka rhoqo kwipropati.